Umgomo kuyadingeka ukuvikela umzimba ezifweni nemiphumela yaso. Njengoba isimiso somzimba sokuzivikela iqala ukukhiqiza ngosuku lwesibili ngemva lokugoma ke kunconywa ukwenza izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwaqala lolu bhadane.
Ukugonywa nokuvimbela Umkhuhlane
Ukuvimbela imfuluwenza ivumela ukulungiselela "influvac". Imiyalelo isicelo uthi umgomo asungula indlela yokukhuluma bangangenwa yilesi sifo, ukumelana amagciwane yeqembu A no B. amasosha omzimba livela 2 amaviki emva yokugoma egcwele. Usuku kuyinto 1 ngonyaka.
Ukuze inoculation akhethiwe nezingaphili yokugoma, isibonelo, "influvac" - ukulungiselela okuyindawo ehlanganisa ebusweni izinhlayiya Umkhuhlane virus. Bakha omzimba isiguli. Unganikeza oluthandwayo yokuhlukanisa wokugoma, equkethe amaseli igciwane esimweni zonakale.
Ngayinye yalezi yokugoma silondeke ngokuphelele futhi ahlinzeke nomphumela ofanayo we isithiyo amasosha omzimba. igciwane Phila kunoma iyiphi umjovo lapho. Ukuvikelwa okuqinisekisiwe kusukela wokugoma umkhuhlane "influvac". Yokusetshenziswa, real - lokhu ubufakazi obengeziwe bokuthi nekusebenta umjovo nokuphepha.
Njengomthetho, wokugoma ezifuywayo amazwe kuhluke izici ezimbili:
Ukuhlanza umkhiqizo, ekhiqizwa ngezigaba ezimbili.
Ngenxa kwalezi zimo ezinhle eyayikuzo, "influvac" wokugoma akakubangeli imiphumela emibi, ngakho-ke engenza ngisho izingane encane abaneminyaka izinyanga 6 futhi abantu abanezifo ezingamahlalakhona, abesifazane abakhulelwe noma lactating.
Yokusetshenziswa "influvac" iqukethe Izimo ezithile yokugoma, kuhlanganise:
Izifo at the stage of ifomu oyingozi noma ezingamahlalakhona lesi sifo ngosuku yokugoma.
ukuzwela okukhulu noma yokungezwani komzimba ukuze inkukhu amaprotheni.
Ukusabela iguliswa ezinye izingxenye umgomo.
ukuphendula siqhamuke nje futhi sinamandla kuya umgomo esedlule nalesi imithi.
Ngaphezu kwalokho, lokugoma imisiwe nesineke uma ehlupheka sibi abandayo noma kukhona isifo oyingozi emathunjini, ngenxa lapho kubonakala ngomkhuhlane omkhulu.
Ukusabela ukuze umgomo, "influvac"
Kukhona futhi imiphumela emibi emva yokugoma ukulungiselela "influvac". Yokusetshenziswa aphike ukuthuthukiswa izinkinga ngemva kokuhlinzwa, kwezinye izimo, kodwa lena inombolo encane yabantu zigonywe. idatha kwezokwelapha kubonisa ukuthi phakathi omdala indlela evamile ukuvela kuphela 1% eziguli, owabekwa ngomgomo, kanye no-4% wesibalo sabantu iye evezwe endaweni. Kepha exacerbations noma yezinkinga ngemva imijovo, ezifana alibhalisiwe.
Ukusabela ukuze umgomo kungenzeka zendawo noma jikelele, ngamunye inezimpawu lalo. Ukuze ukusabela jikelele libhekene izici ezifana:
Ukwandiswa lokushisa emzimbeni isikhathi eside, hhayi ngaphezulu kuka-37.5.
A short umzimba ubuthakathaka, ukukhathala njalo nezimpawu neuralgia.
isimo esinjalo kuvela esiphezulu usuku 1.
Izimpawu wokusabela bendawo ukuze umgomo, "influvac" kuphawula le nkulumo engezansi:
izindawo Iya kancane ububomvu lapho injected.
Kwezinye izimo ubuhlungu livela.
Cishe le ndlela yokusabela Luthatha esiphezulu izinsuku 2 futhi akwakhi ukungakhululeki eqinile.
Kunoma yikuphi, uma kwakukhona ukusabela umjovo Umkhuhlane, lokhu kusikisela ukuthi izivikeli mzimba isebenza at zigcwele. Kwezinye izimo kungase kwenzeke ukushaqeka anaphylactic, Ngakho-ke, ehhovisi, lapho umjovo kufanele kube umuthi kususwe, ezifana adrenaline.
"Influvac" akunamthelela ikhono ukushayela noma iyiphi imoto, lokhu kusebenza futhi neminye imishini noma imishini.
ukusabela phezu ingxenye yomzimba
Kwezinye izimo, umuthi umkhuhlane "influvac" (ngesandla uxwayisa) ebangela yezinkinga phezu ingxenye kwezitho ngabanye emzimbeni.
Ngenxa inoculation legazi uhlelo lymph okungenzeka bahlukunyezwe, okuyinto Kwakuyohlanganisani nokuncipha inani zegazi, ngakho-ke, basengozini enkulu ebangela ukopha futhi izinkinga nalo.
Kusukela eceleni amasosha omzimba kuphakama komzimba nezinto, futhi kwezinye izimo, ngisho ukushaqeka anaphylactic.
Ukunqotshwa kwe-isimiso sezinzwa okubangela ubuhlungu bekhanda, kakhulu kuyaqabukela ukukhubazeka kanye nokuquleka, kanye encephalomyelitis noma optic neuritis. Kodwa ucwaningo lubonisa ukuthi phakathi umgomo okunjena sekunokuxhumana.
Ukungasebenzi kahle kohlelo semithambo kuhilelani vasculitis, okuyinto kuhambisana ukuhlukahluka lezivakashi, ngokuphathelene ukusebenza nezinso.
Ukuqokwa wokugoma "influvac". Yokusetshenziswa
Ukugonywa Asigcini ukuvikela umzimba, kodwa futhi ukuvimbela, isibonelo, izingane ezincane. Ngaphezu kwalokho, okokuqala zigonywe abantu abangekho engozini. Lokhu labantu abaneminyaka engaphezu kwengu-65 abanokuhlangenwe izifo kwezitho kwemigudu yokuphefumula noma ukumelwa inhliziyo abaphethwe ezingamahlalakhona ukwehluleka kwezinso, isifo sikashukela. Futhi baleli qembu yilabo abantu omzimba ebuthaka, abathola imali, ukucindezeleka emsebenzini wakhe, noma uya indlela yokwelashwa yokulwa nomdlavuza abathola umthamo ephezulu corticosteroids.
Ukugonywa kwezingane basesikolweni kuya enkathini yokuthomba iminyaka engu-18, ikakhulukazi kulabo ababamba imithi isikhathi eside, ingxenye okwakukhona acetylsalicylic acid. Zichayeke ingozi yokuba Reye Syndrome, okuyinto eba, kukhona ukusabela emva igciwane umkhuhlane.
Ngokuvamile, umgomo esenzelwe abesifazane abakhulelwe senyanga 2nd noma 3rd, kodwa uma kukhona ingozi okusezingeni eliphezulu ukungcoliswa ke ngokuxhunyelelwa Kwenziwa kunoma yisiphi isigaba izidakamizwa "influvac". Yokusetshenziswa kuhlanganisa izinyathelo yokugoma ezinjalo.
Indlela isicelo futhi umthamo ovumelekile
Ngokusho izidingo, lokugoma wenziwa minyaka yonke ekwindla. Umjovo iqondiswa intramuscularly noma ezijulile ngaphansi kwesikhumba. Isingeniso Umjovo emthanjeni ayivunyelwe iyiphi. Ngaphansi umthetho eziqinile okunjalo futhi uthola umgomo "influvac". Umhlahlandlela likuchaza ngokuningiliziwe indlela ukusebenzisa izidakamizwa efanele.
Izingane ezivela izinyanga 6 kuya eminyakeni emi-3 ubudala iphathwa 0.25 ml ukulungiswa.
Kusukela eminyakeni emi-3 kuya ku-14 iqondiswa 0.5 ml wokugoma umthamo.
Abadala futhi intsha abaneminyaka engu 14 wokugoma iqondiswa kanye, 0.5 ml.
Izingane angakaze umkhuhlane noma abangazange wathola lokugoma Kwenziwa kabili ne esingaba 4 amaviki inqubo.
Ukuphepha Vaccine "influvac"
izifundo Independent baqhuba UBANI ochwepheshe, ukuqinisekisa ukuthi imithi yokugoma zamanje kuphumelela kakhulu ngoba iqukethe izici ebusweni isifo. Sinenkosi reactogenic ongaphakeme ngamagama alula, esimweni esincane kubangele ukusabela umjovo.
Ukulungiswa ayiqukethe nezivimbelakuvunda, Wadlulela izifundo eziningi emazweni ahlukahlukene, zangenela ingxenye abantu abangaphezu kuka-100 eziyinkulungwane. Futhi zonke zocwaningo kwakungekho Udaba olulodwa lapho uzwela luboniswa noma engaziwa engemihle.
Ngemva sokuphuzisa umzimba womuntu kancane ukhiqiza isivikelo Umkhuhlane, ifinyelele ezingeni edingekayo ekupheleni kwesonto lesibili, ezimweni eziningi ephelezelwa ukuxhumelela womuntu lokushisa lomzimba evamile.
Ngempumelelo ekulungisweni wokugoma "influvac"
Buhle ukulungiselela kufinyelelwa ngenxa nokusebenza ngendlela, kunengxenye kulokhu:
Ubuchwepheshe High isetshenziswa ukudala wokugoma "influvac". Yokusetshenziswa, umakhi namazinga global uqinisekise leli qiniso.
Umuthi 'influvac "elihlangabezana nazo zonke izidingo WHO.
Iminyaka engu-10 umgomo iye yasetshenziswa ngempumelelo emphakathini.
Ukuhlola okuhlukahlukene zidlulile "influvac" wokugoma. Yokusetshenziswa aqukethe lonke ulwazi oludingekayo.
Ukuphumelela yokugoma is kwahambisana ngomunye siyimfanelo enhle, ebizwa ngokuthi "smart isibhamu". Iqiniso lokuthi abaningi bayenqaba zigonywe ngenxa yokwesaba umjovo nomkhiqizi uye kunakwe lokhu kusimo futhi ikhishwe umjovo yesimanje, okulula kakhulu ukusebenzisa, futhi ubizwa ngokuthi "Dyufardzhekt".
Uhlelo ikuvumela ukungena umthamo ngqo, ivaliwe futhi ayidingi emaphaketheni ekhethekile, okuyinto usindisa isikhathi ngenqubo yokugoma mass. Inalidi mncane ukuze shot esiyitholayo nhlobo, njengoba ihlanganiswa ne abicah kanye idayimane ngensimbi.
"Influvac", yokusetshenziswa, ukuphila eshalofini
Ngenxa izici zayo, umgomo sikwazi ukulondoloza impahla yabo phakathi nonyaka. Ukuze ahlukanise phakathi umgomo ukuphila eshalofini, umenzi icacisa usuku ukwakhiwa e imiyalelo, ngemva kwalokho kungenzeka izidakamizwa isetshenziswe. Njengomthetho, ngo-June 30 umnqamulajuqu ukusetshenziswa odlule imodeli umjovo ngonyaka.
Ukuze ugcine eshalofini-ukuphila, futhi kufanele kahle egcinwe bese uyiswa izidakamizwa. Ukuvikelwa elangeni, izinga lokushisa ukuhambisana ku ezahlukene degrees 2 kuya kwezingu-8. ezokuthutha Maximum lokushisa "influvac" sifinyelela 25 degrees amahora angu-24. Kufanele libe kude nezingane futhi ugweme okokuqandisa.
Ovaloli sokufaneleka: izinzuzo, izici Ukukhetha ukunakekelwa
Thrush at GV: izimbangela kanye nokwelashwa inkwethu e webele vskarmlevanii